Suu – တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အောင်ဆန်းဦးတို့ တ၀က်စီခွဲယူရန် | MoeMaKa Burmese News & Media
Suu – တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အောင်ဆန်းဦးတို့ တ၀က်စီခွဲယူရန်
19 Responses to Suu – တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အောင်ဆန်းဦးတို့ တ၀က်စီခွဲယူရန်
Abnormal DNA* on June 24, 2012 at 6:57 am
Same parents —different DNAs…
When Daw Khin Kyi was dying , no news for Aung San Oo coming to care his mother…
Now he is greedy to demand for property he does not deseve and and even while he is no more Burmese citizen and comfortably living USA..
Amazing for his shameless demand for this house U Nu government gave to his mother…..
I think his brain is not functioning well since childhood and flared up by his dear wife…..
While sister is enormously rasing Burma and Burmese dignity in international arena , he is digging Burmese image to underground with him …
Any person withalittle sense (except his kind ) would not have done this kind of behavior ——shameful son for his parents….he is even not deserved to wear his sister longyi……..
Wonderful Myanmar present over-respectful court gives the opportunity to foreigner to own Burma land —it is agreeable to Law previous court’s decision?Different Law or different Judge’s delusion? ——Judge taking people salary is just for childish decision —mean half by half due to offsprings —if so , no need for this kind of judge and court ; let street child decide this case….
myo on June 24, 2012 at 8:50 am
If this news is confirmed, we – I think I can say on behalf of most Myanmar – will chip in to refund the shares of this greedy old fellow Aung San Oo. This house shall be maintained asamonument –asymbol of courage and human dignity under oppression.
Aung San Oo, this house isanational treasure. Do not lay evenasingle finger on this house. If you are too greedy, we will refund you with our hard-earned money for your share.
tkhinoo on June 24, 2012 at 1:17 pm
အောင်ဆန်းဦးမိန်းမ ငတ်ကြီးကျက ၀မ်းသာနေမှာဘဲ။ အရမ်းတန်ဘိုးရျိတဲ. တက္ကသိုက်ရိပ်သာလမ်းက အိမ်ကြီးတ၀က်ရပြီဆိုပြီ။
nan khai on June 24, 2012 at 6:03 pm
its fair . y u so angry ? do u have any brother or sister ?
king on June 25, 2012 at 1:33 am
stupid nuts interfering in some one’s personal affairs.
I am not supporting anyone’s side, but if you like to practice democracy, all your words and actions shall not disturb others.
after all, you scumbs have totally no right to poke your nose into someone’s personal affairs.
Need to respect others’ rights, OR you will deserve only marshal law of which that harsh rules will brain wash your uneducated, narrow minded, poor mentalities.
yawna on June 24, 2012 at 2:31 pm
မယားပြောတော့ တညတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် တစက် လေးမှ အနစ်နာမခံဘဲ သခွပ်ပင်က မီးတကျည်ကျည်လို ဖအေ့သမိုင်းမှာ ၇ာဇ၀င်၇ိုင်းအောင်လုပ်နေတာကတော့ အမျိုးမှန်ပီး အဖိုးတန်မှ ဟုတ်၇ဲ့ လား မေး၇မလိုဖြစ်နေပြီ
yawna on June 24, 2012 at 2:42 pm
နှောင်းအတိတ် ၇ာဇ၀င်မှာ ငါတို့ အ၇ှင် မယားကြောက်လို့ တိုင်းပြည် ငါးပါးမှောက် ကျွန်ဘ၀ေ၇ာက်ခဲ့တာမို့ နောင်လာ နောက်သားများ သထိထား အေ၇ွးမမှားကြပါစေနဲ့ လို့ 
Sinsure on June 24, 2012 at 3:25 pm
မသိလို့ မေးပါရစေ အဲဒီခြံအမှတ်က ၄၅၊ ၄၆ လား။ ဒါမှမဟုတ် ၅၄၊ ၅၆လား ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
မင်းတရား on June 24, 2012 at 3:35 pm
နိုင်ငံခြားသား ကို အနိုင်ပေး တဲ့ တရားသူ ကြီးစောက် ရှူးမင်း ကိုခိုင်း တဲ့ ကောင် လည်း အသားထဲက စောက်လောက်။ ငတ်ကြီးကျ လင်မယား အမျိုးသား သစ္စာ ပေါက် တွေ မြန်မာ ပြည် ၀င် လာရင် မစင်နဲ့ ပေါက်ကြ။
San Tun on June 24, 2012 at 4:49 pm
နိုင်ငံခြားသားခံယူထားသူတဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါ။
အမေရိကန်ုနိုင်ငံသားခံယူထားသူ အောင်ဆန်းဦးရဲ့ ဇနီး လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမနာလိုဖြစ်မုန်းတီးလျက်အလို လောဘရမက်ကြီးတဲ့အပြင် အောင်ဆန်းဦး ကိုအမြဲလွှမ်းမိုးသူလို့ ကြားဖူးပါတယ်။
တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ တမင် မှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပြီး ဒေါ်စု ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့ ယူဆရပါတယ်။
min nanda on June 24, 2012 at 5:45 pm
မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်။ ရုပ်ကို က ကျက်သရေ မရှိဘူး။ ညီမ က ကိုယ်ကျိုး စွန့်ပြီးနိုင်ငံ အကျိုး လုပ်နေတာ ကို မကူညီတဲ့အပြင် နှောင့်ယှက်နေသေးတယ်။ DOG တောင် သွေးသား ကိုသိတယ်။ခွေး လောက်တောင် အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ကောင်။
Moemakha Supporter on June 24, 2012 at 5:51 pm
Please be advised to put the title “U” as “U Aung San Oo.” Because whatever the situation may be, he is stillablood descendant of our great National Hero and Father of Burma’s Independance “General Aung San” and our most beloved Ahmay “Daw Khin Kyi.” Great many thanks for the support of all for Ahmay Suu.
ဒိုးလုံး on June 24, 2012 at 6:24 pm
ဒီကိစ္စက န၀တ(ခင်ညွန့် )တို့ စခဲ့တဲ့လုပ်ကြံမှုကြီးပါ ဒေါ်စု ကိုအပြတ်ခြေမှုန်းေ၇းလုပ်ခဲ့ကြတယ်လေ ဒေါ်စုကို ဒုက္ခေ၇ာက်
ခင်ညွန့် ဦးတည်လိုက်တယ်(အောင်ဆန်းဦး ဒီမိန်းမ ကိုယူတော့မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည်ကသဘောမတူဘူးကန့် ကွက်ခဲ့တယ်
ဒီမိန်းမက အကျင့်မကောင်းဘူး နိုင်ငံခြားသား ပြင်သစ်တွေနဲ့ ၇ှုပ်အော်ဒါလိုက်ဒါတွေကိုသိထားတာကိုးအဲဒီမှာဒီမိန်းမကအောင်
စုအပေါ်ကမ္ဘာမကြေပေါ့)ဒါတွေကိုခင်ညွန့် သိတယ်ဒီမှာဒင် ဒီမိန်းမကိုစည်း၇ုံးသူမအမျိုးတွေကိုစီးပွားေ၇းအခွင့်အေ၇းတွေပေး
ပြီးအောင်ဆန်းဦး ကိုအမွေမှုနဲ့ တားစွဲခိုင်းတော့တာဘဲတဏှာ၇ူးကြီးကလည်းဘာမှမစဉ်းစားဘဲမိန်းမခိုင်းသမျှလုပ်ခဲ့တယ်
နိုင်ငံခြားသားအနေနဲ့ နိုင်ငံအတွင်း(မေ၇ွှ့ မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း)အပေါ်အမွေပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်တ၇ားစွဲဆိုခွင့်မ၇ှိဟုဥပဒေ
မှာ၇ှိတယ်အောက်တ၇ား၇ုံးတ၇ုံးကအမှုကိုပါယ်ခဲ့တယ်ဒါကိုခင်ညွန့် ၇ဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အဲဒီအချိန်တုံးကပြည်ထဲေ၇းဝန်ကြီး
ကခွင့်ပြုမိန့် ပေးခဲ့တယ်အခုအထိလုပ်ကြံမှုကမဆုံးဘူးဒေါ်စုအပေါ်မျက်နှာကသာပြုံးသယောင်ယောင်လက်တွေ့ ကတော့
Devil on June 24, 2012 at 11:44 pm
Get out big dog Aung San OO…
salai on June 25, 2012 at 8:29 am
Let me know Doggi aungsan oo address in US.
hla t minn on June 25, 2012 at 8:04 am
This will if approved,becomeaverdict and many foreign citizenship holders ,originally Myanmars can claim that they are entitled half share.We will see how the NLD law team will
HHH on June 25, 2012 at 4:41 pm
ဒီအိမ်ဟာ ဒေါ်ခင်ကြည် နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျယ်ချုပ် နေခဲ့ရတဲ့နေရာ၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ သမိုင်းဝင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့် နေရာပါ။ ဒီအိမ်ရဲ့ နံရံတွေသာ စကားပြောနိုင်ခဲ့ရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထီးကျန်နေခဲ့ရတဲ့ မိသားစုဘ၀ကျိုးကြေခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးကိုပဲကြည့်ခဲ့တဲ့၊ ပြည်သူ ချစ်တဲ့ အာဇာနည်မိန်းမသားတစ်ဦးရဲ့ မျက်ရည်တွေ၊ ခံစားချက်တွေကို ပြန်ပြောနိုင်မှာပါ။ ၀င်းနဲ့ ခြံနဲ့ ထည်ထည်ဝါ၀ါ ၊ ခမ်းခမ်းနားနား ဒီလို အိမ်မျိုးမှာ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်က နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးဖို့လဲ တင့်တယ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီအိမ်ကြီးက အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဦးအောင်ဆန်းဦးရေ ပျက်ခဲ့ရတဲ့ နံမယ်အတွက် အဖတ်ဆည်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ဒီအိမ်ကြီးကိုပေးလိုက်ပါလား။ နတ်၊ လူ သာဓု ခေါ်မှာပါ။ အဲ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ သိပ်ကို ငတ်ကြီးကျလွန်းရင်လဲ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ၀ိုင်းပြီး ငွေစုပြီး ခင်ဗျားကို အိမ်တန်ဖိုး တ၀က် အမ်းပေးပါ့မယ်။ ဒီအိမ်ကြီးကိုတော့ မလိုချင်ပါနဲ့။
Yarza Thingyan on June 26, 2012 at 1:05 pm
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အသက်စွန့် အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားကြီး…..
်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် မိသားစုဘဝကိုစတေးပြီး အနစ်နာခံနေတဲ့
လူထုခေါင်းဆောင် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစ်ကိုကြီး…….
ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ …..ရေးခဲ့တဲ့သမိုင်း ….ရေးနေတဲ့သမိုင်း …ဘယ်လောက်များလှလိုက်သလဲလို့…..
နိုင်ပေမဲ့ အောင်ဆန်းဦးရဲ့အဖေ အောင်ဆန်းဦးရဲ့ညီမပါလို့ လူပုံအလည်မှာ ရဲရဲမပြောဝံ့တဲ့အဖြစ်က….
အောင်ဆန်းသမိုင်းကို ရိုင်းစေတော့မှာလား “ကိုဆန်းဦး”ရေ…..(အောင်ဆန်းဦးလို့ခေါ်မထွက်လို့ပါ)
Yarza Thingyan on June 26, 2012 at 1:26 pm
ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးတစ်တုံးပါလာတာ တော်တော်အော့နှလုံးနာဖို့ကောင်းတယ်….။